Talada Pro: Ku hagaaji xawaaraha jiirka iyo raadka galka iPadOS | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Talada Pro: Ku hagaaji xawaaraha jiirka iyo raadka galka iPadOS
Talada Pro: Ku hagaaji xawaaraha jiirka iyo raadka galka iPadOS
Jiirka caadiga ah ee Apple iyo goobaha trackpad ee iPadOS waxaa laga yaabaa inay si weyn ula shaqeeyaan agabka shirkadda, laakiin waxay noqon karaan kuwo ka yar kuwa ku habboon qaybaha dhinac saddexaad. Xawaaraha wareega, gaar ahaan, wuxuu u muuqdaa mid aad u xanaaq badan.
Nasiib darro, Apple waxay go'aansatay inay fikrad fiican tahay in la qariyo goobaha xawaaraha duubista, sidaas darteed isticmaaleyaal badan ayaan wax fikrad ah u lahayn in la hagaajin karo. Halkaan waxaad ka heli kartaa iPad-ka.
Kadib marka aad ku xidho mouse-ka Bluetooth-ka ama trackpad-ka iPadOS, waxa aad arki doonta liiska cusub ee “Trackpad and mouse” ee qaybta Guud ee abka Settings. Waxaa laga yaabaa inaad u maleyso in dejimaha xawaaraha duubka ay ka muuqan doonaan halkan, laakiin ma muuqdaan.
Taa baddalkeeda, waxaad u baahan doontaa inaad dhex gasho jaangooyooyinka Helitaanka iPadkaaga. Marka hore ku xidh mouse-kaaga ama trackpad-ka ( menu-ka aad u baahan tahay si kale uma muuqan doono), ka dib raac tillaabooyinka hoose.
Sida loo hagaajiyo xawaaraha rog-rogadka gudaha iPadOS
Fur fur Settings app, ka dibna taabo Helitaanka.
tubada Kontoroolka tilmaamaha.
Raadi Xawaaraha Wareejinta slider xagga hoose ee bogga oo hagaajiyo.
Liiska kontoroolka tilmaamuhu waxa kale oo uu ku siinayaa awood aad ku kordhiso farqiga tilmaamayaasha, si aad u joojiso ikhtiyaarka aad si toos ah u qarinayso tilmaamaha jiirka ka dib marka uu shaqaynayo dhawr ilbiriqsi, iyo in aad beddesho midabka tilmaameha iyo cabbirka.
Xawaaraha duuduubka ee caadiga ah wuxuu noqon karaa mid aad u dheereeya oo leh qalabyada qolo saddexaad.
Goob la mid ah ayaa laga heli karaa iPhone haddii aad u baahan tahay. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin kale oo ka dhigaya isticmaalka jiirka ama trackpad gudaha iPadOS xitaa ka sii wanaagsan:
Sida loo wadaago mouse, kiiboodhka iyo trackpad inta u dhaxaysa iPadka iyo Mac
Sida jeermiska looga jebiyo Mac kaaga, iPhone kaaga, mouse-kaaga, trackpad-ka, kiiboodhka iyo kiisaska
Sida loogu daro dhaqdhaqaaqyada trackpad Mouse kaaga
Ka faa'iidayso badhamada mouse-ka ee iOS 13
Sida loo isticmaalo jiirka iPad-kaaga
Kobaca dakhliga xayaysiiska Amazon ayaa si joogto ah u haayay Q1: Waxa ay hadda uga dhigan tahay xayaysiiyayaasha
8-da Mowduucyada Baabuur ee WordPress ee ugu Wanaagsan